SELFPOWA fanaraha-maso an-jotra | Solar Solve Marine
Ho an'ny SOLASOLV® sy ROLASOLV®
Anti-glare antitra sy jirobe
SELFPOWA® dia rafitra fanaraha-maso tsotra sy mora azo ampiasaina amin'ny famoahana jiro sy rindrina.
SELFPOWA® dia 100% Wireless sy Battery Operated. Tsy misy fepetra takiana. Ny kapila elektrika Lithium 12v DC dia hita mibaribary tsy hita maso ao anatin'ny fantson-jiro Aluminium.
Ankafizo ny fahatsapana ny jirom-jiro na angadin'omby avy amin'ny fampiononana eo amin'ny sezanao. Ny jiol-jiro dia azo raisina na hidina amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso an-taribia manome vahaolana tonga lafatra ho an'ny jambena miasa any amin'ny toerana sarotra na amin'ny varavarankely avo na lehibe. Misy safidy malalaka amin'ny safidy atao amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso an-tariby azo ampiasaina amin'ny fitantanana ny jiron'ny jiro tsirairay na maro samihafa.
Azo ampiasaina hanamboarana lithium batterie ny solosaina solosaina azo atao.
Azo ampiasaina ny SELFPOWA®
SOLASOLV® Fanilo tsy miangona miovaova
Tavoahangy rindrina miloko Blackout
The SELFPOWA® Ny rafitra dia azo ampiasaina mba hampiasana ny roa tonta SolaSOLV® ary RolaSOLV® jiro sy efitrano izay ampiasaina amin'ny sambo marinasa, rindrina solika, fiaramanidina gazy, fiaramanidina VTS Control, fiaramanidina fiaramanidina Air, Cranes ary toerana maro hafa ny toerana misy ny masoandro!
SELFPOWA® dia manana tombony maro
Voafehy lavitra - Tsy misy tadiny na rojo!
Powered amin'ny bateria - Tsy misy fifandraisana elektrika!
Mora ampiasaina, Mijanona amin'ny toerana rehetra
Haingana & Mora apetraka ka mihena ny vidiny
Tsy misy fanakorontanana ny Decor Interior
Karazana Tolotra nankatoavina
Fanampiana ara-teknika matihanina
Manamboatra haingana sy hanala baraka eran'izao tontolo izao
Anisany ny ampahany
Karazana nankatoavin'ny Lloyds, ABS, DNV ary RINA
Manolotra servisy 24 ora Fast Offpatch isika ho an'ny baiko maika. Ny jiron'ny SELFPOWA® dia omena alahatra amin'ny fametrahana ny fametahana fantson-koditra ho an'ny kofehy tsirairay ary tonga ho vondrona iray manontolo. Manana tetikady miavaka izy ireo amin'ny fanorenana haingana sy mora amin'ny ekipan'ny sambo.
Ny vokatra rehetra dia samihafa am-pilaminana sy fitsapana alohan'ny hikirakirana amin'ny kalitao avo lenta, natao ho an'ny kitapo vita amin'ny hazo mba hahazoana antoka fa atolotra antsika amin'ny vokatra tsara ny vokatra isaky ny mandeha!
Fampiharana hafa ...
SOLASOLV® tsy misy tariby, ny hafanana mandavona ny jiron'ny jiron'ny jiro, ny masoandro ary ny ROLASOLV® jiro jiro miloko dia mety tsara amin'ny fampiasana orinasa sy indostrialy hafa izay tsy maintsy manoloana ny tara-pahazavan'ny masoandro mandritra ny andro fiasana, na ny fepetra mitranga tanteraka. Ireto misy vitsivitsy amin'ireo fampiasana hafa: -
LITETITE® jiro jiro
STOPLITE® Atsaharo amin'ny toerana rehetra ny Flare Retardant Blackout Roller Blind
CASSLITE® jiro jiro
SOLASAFE® Anti Glare